Ku qabso Wadahadal lala yeesho SPACs - Alietc.com
Samiira Hassanzadeh March 13, 2021 0 comments
Shirkadda 'Grab ride-hailing' waxay kala xaajooneysaa shirkad ujeeddo gaar ah la leh Mareykanka (SPAC) inay dadweynaha u soo bandhigaan. Heshiiska midowga waxaa lagu qiimeeyaa inta udhaxeysa $ 35 billion ilaa $ 40 billion, macaamilkii ugu weynaa abid.
Grab Holdings Inc ayaa kala hadlay Altimeter Capital Management, oo taageerta laba SPACs. Marka la eego, warbixin cusub ayaa lagu sheegay in Grab uu gorgortan kula jiro Altimeter iyada oo aan la sheegin taas.
Waxaa la aasaasay 2012, shirkadda ugu weyn ee keenta cuntada koonfur-bari Aasiya weli ma aysan dhammaystirin wax heshiis ah.
SPACs waxay la midoobaan shirkadaha, iyaga oo ku dhiirrigeliya jadwalka liis gaagaaban, waxayna lacag ku ururiyaan IPO.
Maalgashadayaal badan oo adduunka ah, sida SoftBank Group Corp iyo Mitsubishi UFJ Financial Group, ayaa shirkadda taageera. Waxaa la filayaa in maalgashadayaasha gaarka loo leeyahay ay ka caawin doonaan Grab soo uruurinta $ 3 billion ilaa $ 4 billion.